မတ်လ 2014 | 35 ၏စာမျက်နှာ 70 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 35)
@FujifilmUS NAB 2014 ကို AT NEW IS-မြျှောစငျအ image SYSTEM မိတ်ဆက်
ယင်း၏ကောင်းချီး Image ကိုထုတ်ယူခြင်းစနစ်လိုင်းအထိထည့်သွင်းခြင်း, Fujifilm မြောက်အမေရိကကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ Imaging ကတိုင်းက၎င်း၏၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် - Fujifilm မျိုးစုံကင်မရာဒီဇိုင်းသစ် IS-မြျှောစငျအ image SYSTEM ကို AT NAB 2014 နယူး software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ VALHALLA, နယူးယော့, မတ်လ 18, 2014 ထုတ်လွှင့်မိတ်ဆက် ဧပြီလ 7025-7, 10 ကနေ Las Vegas မှာအဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌လူငယ်ကဏ္ဍပြပွဲအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာ System ကို, Booth #C2014 ရေးစင်တာခန်းမ,-TowerImaging IS ။ အဆိုပါစနစ် Fujifilm IS-မျှော်စင်တလျှောက်အသုံးပြုသောအခါ, အရာ, ဆော့ဝဲ, ပါဝင်သည် ...
@AssimilateInc - MyASSIMILATE တိမ်တိုက်-Enabled လုပ်ငန်းအသွားအလာနေ့စဉ်နဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအဆိုတော်များအတွက်တည်နေရာနှင့် Proximity ၏အတားအဆီးချိုးပြီ
မတ်လ 18, 2014 - - ပြည်တွင်းပိုက်လိုင်း Santa Clara,, CA ၏အားသာချက်များနှင့်အတူတစ်တိမ်တိုက်-Enabled လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ပူးပေါင်းဝါးမြိုခြင်း, ပစနှင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tool များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ပေးသူ, အများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ MyASSIMIILATE, tools တွေကိုတစ်ကြံ့ခိုင် set ကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အသစ်က Scratch နှင့် Scratch Lab မှ v8 အပေါင်းတို့, အားသာချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအစွမ်းထက်သောမိုဃ်းတိမ်-enabled လုပ်ငန်းအသွားအလာဖွ ...
@AssimilateInc - Microsoft Windows နဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ် Scratch နှင့် Scratch Lab မှ v8 Encoding များအတွက်လိုင်စင်များ ProRes သိမ်းသွင်း
မတ်လ 8, 18 - - လတ်တလော Scratch အတွက်ဒေါင်းလုပ်နှင့် Scratch Lab မှ v2014 Santa Clara,, CA များအတွက်ရရှိနိုင်ရဝါးမြိုခြင်း, ပစနှင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tool များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏ရေပန်းစားSCRATCH®နှင့် Scratch Lab®ဆော့ဖ်ဝဲသစ်ကို V8 ဗားရှင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ အသုံးပြုသူများသည် Microsoft Windows နဲ့7/ 8-based PC များပေါ်တွင် Apple က ProRes ဖိုင်တွေဝှက်ဖို့ခွင့်ပြု။ Scratch နှင့် Scratch Lab က ...
@AssimilateInc - ဝါးမြိုခြင်းအစွမ်းထက် Scratch နှင့် Scratch Lab မှ v8 ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; Windows အတွက်သဲဇာတိ ProRes Encoding ပါဝင်သည်
DeckLink ပံ့ပိုးမှု, နယူး remote connection စှမျးအစွမ်းထက် v8 ဖြန့်ချိ Santa Clara,, CA ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Are - မတ်လ 18, 2014 - ဝါးမြိုခြင်း, ပစနှင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tool များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့SCRATCH®နှင့် Scratch Lab® v8 ကြေညာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသစ်ကိုဗားရှင်းအနီရောင်မီဒီယာနှင့်အဘို့အထောက်ခံမှုကို Windows, Multi-GPU ကို Debayering အပေါ်မကြုံစဖူးApple® ProRes encoding ကစွမ်းရည်ပူဇော် ...
Freeview HD ကိုသဟဇာတအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နေအိမ်များမှအခမဲ့-to-အမြင် TVPlayer နှင့် Planet ကိုအသိပညာလိုင်းများကိုရောက်စေဖို့ SynapseTV
မတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၄ (TV Connect, London) ။ ။ မကြာမီ Freeview တွင်အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည့်လိုင်းနှစ်လိုင်းကိုမကြာမီစတင်တော့မည်ဟု OTT ၏ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ Synapse TV ကယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ TVPlayer - အခမဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်သောတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့် TV အစီအစဉ်နှင့် Planet Knowledge - လိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တီဗီဝန်ဆောင်မှု - ကိုမကြာမီတွင် UK ရှိသဟဇာတဖြစ်သော Freeview HD အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအိမ်များကိုရရှိနိုင်မည်။ ...
MIPI® CSI-4 တံတား Chipset သည်ရန်တိုရှီဘာ Introduces ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ 2K HDMI® ...
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်သည် ... www.prnewswire.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါMIPI® CSI-4 တံတား Chipset ရန်မဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ EditionToshiba Introduces ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ 2K HDMI® Beat
ရှုပ်ထွေး 2014: SSL ကို မှစ. သုံးနယူး plug-ins
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, SSL ကို Sonic ပြည်နယ်မှသည်နေ့စဉ် EditionThree နယူး plug-ins မှာပိုပြီးကြည့်ရှုပါ: www2.solidstatelogic.com//news/ssl-announce-trio-new-duende-native-plug-developments#sthash .EKP0oBcK.dpuf ။ အစိုင်အခဲပြည်နယ် Logic www.sonicstate.com အပေါ်ဘို့ ... ကိုကြည့်ပါကအဓိကအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏သုံးကြေညာထားသည်
#NABShow မှာက Ultra HD ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဟန်ပြ checkout
အသံနှင့်ဗီဒီယို၏ဧရိယာများတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒီအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်နေသောထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နယ်နိမိတ်၏န့်အသတ်မရှိပါဘူးရှိသည်! ဒါပေမယ့် "ကွင်းဆက်" ၌စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းခန့်မှန်း, အရေးကြီးသော NAB 2014 မှာက Ultra HD ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဟန်ပြနဲ့တူညီလာခံ "ကိုတက်ရောက်ဖို့ရမယ်" ဟုမဖြစ်မနေပါ! က Ultra HD ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ & ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာညီလာခံမှာ ...
35 ၏စာမျက်နှာ 70«ပထမဦးစွာ...102030«3334353637 » 405060...နောက်ဆုံး»